Ngụkọta oge nke ihe
The ngụkọta oge nke ego nke ciment, ájá na gravel nke na-eme ihe
Ọnụ ego nke ihe E
Akpa nke ciment kwa 1 cubic mita M
N'ike-n'ike nke ihe
ciment : ájá : anuahade nkume site na ibu ibu
Ndị na-eri ụlọ Akụrụngwa
ciment (kwa akpa)
ájá (1 ton)
anuahade nkume (1 ton)
ozi na ngụkọta oge nke ihe maka ihe
Ezipụta achọrọ nkezi.
E - The chọrọ ego nke ihe. Gosiri na cubic mita.
M - Olee otú ọtụtụ akpa nke ciment achọrọ maka 1 cubic mita nke ihe.
K - Ibu ibu nke na otu akpa ciment. Na kilograms.
Ezipụta uru nke ihe ndị dị n'ógbè gị.
Echefukwala gụọ price nke nnukwu ihe na price site arọ na ọ bụghị site olu.
N'ike-n'ike na oriri nke ciment, ájá na gravel nke na-eme ihe cube nke a ndabere bụ maka akwụkwọ, dị ka na-atụ aro site Nsukka ciment.
N'otu aka ahụ, price simenti, ájá, ajịrịja nkume ike ịdị iche iche budata dị iche iche na mpaghara.
Ihe mejupụtara nke okokụre ihe ngwakọta na-adabere na nke (fractions) anuahade nkume ma ọ bụ gravel, ciment ika, ya freshness. Ọ na-mara na ruo ogologo oge nchekwa ciment tụfuru ya Njirimara, na na elu iru mmiri ciment àgwà-adị njọ ngwa ngwa. Rịba ama na ciment akpa ike itu 50 n'arọ, dị ka e dere ya. Ịtụkwasị Obi ma nyochaa. Ole ciment ị wụsara mma ego.
Biko mara na ndị na-eri nke ájá na gravel na-akọwapụtaghị usoro ihe omume 1 ton. Mgbere na-mara ọkwa a price kwa cubic mita nke ájá ma ọ bụ echi ọnụ n'ala nkume ma ọ bụ gravel.
The òkè nke ájá na-adabere na ya si, ka ihe atụ, osimiri ájá dị arọ karịa a ọrụ.
Ajịrịja nkume na-echi ọnụ n'ala nkume. Dị ka dị iche iche na isi mmalite 1 cubic mita arọ sitere na site na 1200 ka 2500 n'arọ dabere na akụkụ (size). Arọ - karịa mma.
Ya mere gụọ na-eri kwa ton nke ájá na gravel i nwere onwe gị. Ma ọ bụ dee na-ere.
Otú ọ dị, na ngụkọta oge ka na-enyere mara na e mere atụmatụ na-akwụ ụgwọ maka iwuli ihe maka nkwadebe nke ndị dị mkpa nke ukwu nke ihe.